अप्रिल 28, 2016 | समाज, हट टपिक्स
अप्रिल 19, 2016 | समाज, हट टपिक्स
‘बलात्कार’ शब्द समेत हामी सुन्न सक्दैनौ । तर यो भोग्नेको हालत के होला ? त्यसमाथि उमेर नै नपुगेका नानीहरु बलात्कारमा पर्दा हालत के होला ? यो कल्पनाबाहिरको कुरा हो । जुन हामी सोच्न पनि सक्दैनौ ।
तर कतिपय मान्छेहरु यस्ता हुन्छन जो पशुपंक्षीदेखि नाबालिका र शिशुलाई समेत बलात्कार गर्न पछि पर्दैनन् । हालै अमेरिकामा भएको एउटा घटनाले यो कुरालाई घाम जतिक्कै छर्लंग बनाइ दिएको छ । जसलाई संसारका सबै भन्दा क्रुर बलात्कारी भन्दै २ सय वर्षको जेल सजाय सुनाईएको छ । उसको अपराध नै त्यस्तो थियोकी उनलाई जति सजायँ सुनाए पनि कमै हुन्थ्यो ।
अमेरिकाको अदालतले पूर्व तटरक्षक एरिक केविन मास्टर्सले १८ महिनाको बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।
उनले आफ्नो कर्तुतका भिडियोसमेत बनाएका थिए । गत बिहीबार २९ बर्षीय एरिकलाई मिसिगनको अदालतले २०० बर्षको सजाय सुनाएको छ ।
अदालतका न्यायाधीश मार्क ट्रसकले सजायँ सुनाउँदै भने (‘तिमी साँच्चिकै राक्षस हौ । हामीलाई यो सुनिश्चित गर्नु छ कि तिमीजस्ता मानिसले पुनः समाजमा कदम राख्न नसकुन् ।’
न्यायाधीशले इजलासमै जानकारी दिए कि उनले ३१ बर्षको व्यवसायिक जीवनमा यस्तो बर्बर घटना अहिलेसम्म सुनेका थिएनन् ।एरिकले सन् २०१२ मा गरेको अपराधका लागि २०० बर्ष सम्मको सजायँ सुनाइएको हो । उनलाई पछिल्लो महिनामात्र तीन बच्चाको पोर्नोग्राफीको मामलामा ५० बर्षको सजायँ सुनाइएको थियो ।
न्यायाधीशले जव यस हर्कतको ’bout यस मामलाको प्रमाण गन्न सुरु गर्दा अदालतमा रहेका मानिसहरु भावुक बनेका थिए । न्यायाधीशले भने(‘तिमीले १८ महिनाको बच्चीलाई उठायौं, उ बिल्कुलै निर्दोष थिइ, तिमीले उसलाई एक मोटल (हाइवेमा रहेको होटल) को कोठामा लग्यौ । त्यसपछि बच्चीलाई निर्बश्त्र र्पायौ र बेडमा राखेर बच्चीको बलात्कार र्गयौ ।
एफविआइका अनुसार एरिकले यस पाशविक हर्कतको भिडियो बनाएर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कारोबारमा बेचेका थिए । सुनुवाईको क्रममा एरिकले उनको यो दोषका लागि माफी मागेका थिए ।
पीडित बालिकाको आमाले न्यायाधीशसँग भनिन् (‘यस मानिसले मेरी छोरीको जिन्दगी बर्वाद बनायो, उ यो घटना कहिल्यै बिर्सिन सक्दिन, न्यायाधीश ज्यू म तपाईँसँग प्रार्थाना गर्छु कि यसलाई कहिल्यै नछोड्ने सजायँ होस्, यो दुनियाँमा रहन लायक छैन ।’